At long last the date of this blog's retirement is here!!!On December 18, 2008!!!
တစ်ခါတစ်ခါတွေးရင်းနဲ့ ရူးချင်စိတ်ပေါက်လာတယ်...တကယ်တော့ ကိုယ်အဆင်ပြေနေတဲ့ နေရာက ကိုယ့်အတွက် အကောင်းဆုံးပါပဲ...ဒါပေမဲ့လည်း လောကကြီးက ကိုယ်ဖြစ်ချင်သလိုမှ မဖြစ်တာ... သူ့ဟာသူဖြစ်ချင်သလို ဖြစ်နေတဲ့ လောကကြီးထဲမှာ ကိုယ်က အဆင်ပြေအောင် နေသွားရမှာ...ဆရာတော် ဦးဇောတိက ဟောသလိုပေါ့...တစ်ခါတစ်ခါ စိတ်ပေါက်လာတော့လည်း အဲဒီလို စာပေလေးဖတ်ထားတာတွေကလည်း စိတ်ကိုထားတတ်အောင် သင်ပေးနေသလိုပါပဲ...
အပျင်းပြေပေါ့...show running-config လို့မရိုက်ဘဲ haha (နမူနာ) လို့ရိုက်လိုက်တာနဲ့ running-config ကို ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်...testrouter(config)#alias exec haha show running-configexit ထွက်ပြီး haha လို့ ရိုက်လိုက်တာနဲ့ running-config ပေါ်လာပါလိမ့်မယ်...hehe လို့ရိုက်တာနဲ့ configure terminal ထဲကို ရောက်ချင်ရင်ရော...testrouter(config)#alias exec hehe configure terminal
Network မှာ ဘယ် host က ဘယ် switch ရဲ့ ဘယ် port (interface) မှာ connect လုပ်ထားသလဲ သိချင်ရင်show mac address-table ကို သုံးပြီး ရှာကြည့်ပါ...show mac address-table နဲ့ မရရင်show mac-address-table ကိုသုံးပါ...mac နဲ့ address ရဲ့ကြားမှာ hypen(-)ပါတာ မပါတာက IOS version ပေါ်မှာ မူတည်ပါတယ်...
- advertisements occur every 60 seconds- works at Layer2 (Data Link Layer)- sents as multicast, using destination MAC 01:00:0c:cc:cc:cc- show cdp neighbors detail
- ပထမဆုံးအဆင့် အနေနဲ့ Router ကို ဘာ enable password မှ ပေးမထားပါဘူး...enable လို့ရိုက်ပြီး router ထဲကို ၀င်လိုက်ပါပြီ...testrouter con0 is now availablePress RETURN to get started.testrouter>enabletestrouter#- နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ router ကို enable password ပေးပါမယ်...password က CcNa ဆိုပါစို့...case-sensitive ဖြစ်ပါတယ်...testrouter#testrouter#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.testrouter(config)#enable password CcNatestrouter(config)#exittestrouter#- Password ပေးပြီးပါပြီ...Configuration မှာ verify လုပ်ကြည့်ပါမယ်...testrouter#sho run | inc enableenable password CcNatestrouter#- Router ကို logout လုပ်ပြီး enable password ကို စမ်းကြည့်ရအောင်...testrouter#logouttestrouter con0 is now availablePress RETURN to get started.testrouter>enatestrouter>enablePassword:Password ကို CcNa ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါမယ်...testrouter>enablePassword: (CcNa ဟုရိုက်ရန်)testrouter#- နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ enable secret ပေးကြည့်ရအောင်...Ccnp လို့ပေးပါမယ်...testrouter#testrouter#configure terminalEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.testrouter(config)#enabtestrouter(config)#enable setestrouter(config)#enable secret Ccnptestrouter(config)#exit-Config ကို verify လုပ်တဲ့ အခါမှာ ခုလိုတွေ့ရပါမယ်...သတိထားမိတာက enable password ပေးတုန်းက CcNa ဆိုပြီး configuration မှာ ပေါ်ပေမဲ့ enable secret ကျတော့ Ccnp လို့ပေးပေမဲ့ enable secret5$1$E/Vg$I.rYbR0rAyKN7LLWJw8rM1 ဆိုပြီး ပေါ်တယ်...အဲဒါ encrypt လုပ်ထားတာ...security reason တစ်ခုပါ...testrouter#sho run | inc enableenable secret5$1$E/Vg$I.rYbR0rAyKN7LLWJw8rM1enable password CcNatestrouter#- နောက်တစ်ဆင့်အနေနဲ့ Router ကို logout လုပ်ပြီး enable mode ကို ၀င်ကြည့်တဲ့အခါ ဘယ်password နဲ့ဝင်ရမှာလဲ...CcNa လား..Ccnp လား...တနည်းအားဖြင့် enable password လား enable secret လား....enable secret ဖြစ်တဲ့ Ccnp နဲ့ဝင်မှ ရပါမယ်...enable password ဖြစ်တဲ့ CcNa နဲ့ ၀င်လို့မရတော့ပါဘူး...testrouter#logouttestrouter con0 is now availablePress RETURN to get started.testrouter>enatestrouter>enablePassword:Password ကို CcNa ဆိုပြီးရိုက်လိုက်ပါမယ်...testrouter>enablePassword: (CcNa လို့ရိုက်ရင် ၀င်ခွင့်မပေးပါဘူး...Ccnp လို့ရိုက်မှသာ ၀င်လို့ရပါမယ်)testrouter#- ဒီတော့ enable secret ကို အသုံးပြုဖို့ recommend ပေးပါတယ်...- ခုဆိုရင် configuration မှာ enable password CcNa လို့ပေါ်နေပါတယ်...အဲဒါကို CcNa လို့မပေါ်စေဘဲနဲ့ Type7Password ဆိုပြီး encrypt လုပ်ချင်ရင် service password-encryption ဆိုတဲ့ command ကို သုံးရပါမယ်...testrouter#testrouter#conf tEnter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.testrouter(config)#sertestrouter(config)#service passtestrouter(config)#service password-encryptiontestrouter(config)#exittestrouter#-အဲဒီနောက် Configuration ကို verify လုပ်ကြည့်ရင် အခုလို အောက်မှာပြထားတဲ့အတိုင်းတွေ့ရပါလိမ့်မယ်...enable password70528052120...testrouter#sho run | inc enableenable secret5$1$E/Vg$I.rYbR0rAyKN7LLWJw8rM1enable password70528052120testrouter#- သို့ပေသော်လည်း အဲဒီ enable password70528052120 ကို Boson's ရဲ့ Getpass ဆိုတဲ့ software ကို အလွယ်တကူသုံးပြီး crack လိုက်လို့ရပါတယ်...ပုံမှာကြည့်ပါ...- နောက်ဆုံးအနေနဲ့ Router ရဲ့ config mode ထဲကို ပြန်ဝင်ပြီး no service password-encryption လို့ ပြန်ပြောင်းကြည့်သော်လည်း enable password က CcNa ဆိုပြီး ပြောင်းမသွားဘဲ Type7password အနေနဲ့ပဲ အခုလို enable password70528052120 တွေ့နေရမှာပါ...- ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ...
CCNA ကို လေ့လာကြတော့ စာအုပ်တွေကလည်း အများကြီးပါ...Wendell Odam ရဲ့ Cisco Press CCNA , Todd Lammle ရဲ့ CCNA (Sybex Press), Richard Deal ရဲ့ CCNA...ကျွန်တော့တုန်းကတော့ Wendell Odam ရဲ့ စာအုပ်ကို အရင်စဖတ်တဲ့ အခါမှာ သိပ်အဆင်မပြေဘူး...ဒါနဲ့ Todd Lammle ရဲ့ စာအုပ်က အရမ်းကို ရှင်းလင်းလွယ်ကူစွာ ရေးထားတော့ ဖတ်ရတာ တော်တော်အဆင်ပြေပြီး နားလည်လွယ်တယ်...ဘယ်သူရေးတာပဲဖြစ်ဖြစ် အကြောင်းအရာ တစ်ခုကို နားလည်ဖို့က အရေးကြီးတာပဲလေ...ခုလည်း ဟိုရှာဒီရှာရင်းနဲ့ Chris Bryant ရဲ့ CCNA စာအုပ်ကို တွေ့သွားတယ်...သူ့ရဲ့ CCNA နဲ့ ပက်သက်တဲ့ Articles လေးတွေလည်း ဖတ်ဖူးပါတယ်...နားလည်ရလွယ်တယ်...ရှင်းလင်းတယ်...သူ့စာအုပ်ကို ခုပြန်ဖတ်နေပါတယ်...ကျွန်တော်တော့ တော်တော်ကြိုက်ပါတယ်...လိုချင်ရင် comments မှာ အီးမေးလ်လိပ်စာချန်ထားခဲ့ပါ...ဒေါင်းလုပ်လုပ်ဖို့ လင့်ခ် ပို့ပေးပါ့မယ်...Chris ရဲ့ Site ကတော့ http://www.thebryantadvantage.com/...သူ့ရဲ့ CCNA Security စာအုပ်လေးလည်း လိုချင်ပါတယ်...ခုထိတော့ ရှာမတွေ့သေးပါဘူး...၀ယ်မယ်ဆိုရင်တော့ USD 47 ဒေါ်လာပါ...ရှိကြတယ်ဆိုရင်လည်း share ပေးကြဦး...နောက်ဆုံးမရတော့ဘူးဆိုရင်တော့ Group Share Buy လုပ်ကြည့်ပါဦးမယ်...နောက်ဆုံးသည်းမခံနိုင်တော့ဘူးဆိုရင်တော့ တစ်ယောက်တည်းပဲ ၀ယ်လိုက်ပါတော့မယ်...USD 47 ဒေါ်လာဆိုပေမဲ့ ပြန်ရမဲ့ knowledge က 47 ဒေါ်လာ မကပါဘူး...http://www.thebryantadvantage.com/CCNASecurityExamStudyPackage640553IINS.htmChris ရဲ့ Tutorials လေးတွေကိုဖတ်ကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင် သူ့Blog က http://thebryantadvantage.blogspot.com/ ပါ... ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...
ဟိုကဖိတ် ဒီကဖိတ် နဲ့ ဒီနှစ် ဒီဇင်ဘာကတော့ တော်တော်ပျော်စရာကောင်းတဲ့ လ လို့ ဆိုရတော့မယ်...18 December 2008 ( Thursday ) - Young NTUC Appreciation Nite @ D.X.O19 December 2008 (Friday) - Company Dinner & Dance @ The Fullerton Hotel24 December 2008 (Wednesday) - YCiS Net Christmas Party @ Sentosa25 December 2008 (Thursday) - Ashes for Beauty - GLCC's Christmas Musical @ NUS University Cultural CentreFullerton Hotel ကတော့ ကိုယ့်ပိုက်ဆံနဲ့ကိုယ်ဆိုသွားနိုင်မှာ မဟုတ်ဘူး...အဲဒီနေ့ကျရင်တော့ ပြဲကားနေအောင် စားပလိုက်မယ်...ပျော်လိုက်တာ...
Reference : CCNA Security Chapter 11
Inbound (in) : Applies to packets received on the router interface.Outbound (out) : Applies to packets transmitted outbound on the router interface. When configuring out ACLs, you setup the filter only on the one outgoing interface instead of on each individual incoming interface.Reference : CCNA Security Chapter 10
What is Endpoint Security? (CCNA Security Chapter 7)
Endpoint ဆိုတာ everything from workstations to PDAs, laptops to smart phones. Servers တွေကိုလည်း Network Environment မှာ endpoint အဖြစ် ပြောလို့ရတယ်...Endpoint Protection Methods တွေကတော့ HIPS (Host-based IPS), integrity checkers, Operating System Protection နဲ့ Cisco NAC Appliance တွေပါဝင်ပါတယ်...CCNA Security Chapter7မှာ buffer overflows, virus, worms နဲ့ Trojan horses တွေအကြောင်းကိုလည်း ပြောသွားပါတယ်...Cisco NAC နဲ့ Cisco Security Agent ကိုသုံးပြီး Operating System vulnerabilities တွေကို ကာကွယ်လို့ရတဲ့ အကြောင်းတွေပြောသွားပါတယ်...Chapter7ကတော့ ကျွန်တော့်အမြင်ဒီလောက်ကြီးစိတ်ဝင်စားစရာ မကောင်းပါဘူး...စာမေးပွဲအတွက်တော့ ဖတ်ထားသင့်ပါတယ်...
Cisco က Indian Engineering Students တွေကို CCIE-Level ထိအောင် Training ပေးမည်
Cisco က သူ့၇ဲ့ GTAP လို့ခေါ်တဲ့ Global Talent Acceleration Program ကို Bangalore, India မှာ launch လုပ်ဖို့ ကြေငြာလိုက်ပါပြီ... 37-weeks ကြာမြင့်မှာ ဖြစ်ပြီး classrooms training နဲ့ hands-on expereince တွေအဖြစ် training ပေးသွားမှာ ဖြစ်ပါတယ်...Indian Engineering Students တွေကို CCIE-Level ထိအောင် Training ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်...အော် အဲဒီ Training များ သွားချင်စမ်းပါဘိ.... အသေးစိတ်ကို ဒီမှာဖတ်ပါ....http://newsroom.cisco.com/dlls/2008/prod_101608.html
I do want this one : Price: $1,999.00
Product Overview The IPexpert Self-Study Blended Learning Solution contains an unmatched quantity of recently-updated and newly-created material designed with our renowned “Learn By Doing™” approach. This program provides you withaconsolidated learning experience delivered through various forms of media. Each component is built intoastreamlined, user-friendly learning environment that maximizes your study time and focus!Source : http://www.ipexpert.com/index.cfm/product/sku/IPX0276
My affectionate stuffs
I spent 20 years trying to get out of this placeI was looking for something I couldn't replaceI was running away from the only thing I've ever knownLikeablind dog withoutaboneI wasagypsy lost in the twilight zoneI hijackedarainbow and crashed intoapot of goldI been there, done thatand I ain't lookin' back on the seeds I've sown,Saving dimes, spending too much time on the telephoneWho says you can't go home[Chorus]Who says you can't go homeThere's only one place they call me one of their ownJustahometown boy, bornarolling stone, who says you can't go homeWho says you can't go back, been all around the world and asamatter of factThere's only one place left I want to go, who says you can't go homeIt's alright, it's alright, it's alright, it's alright, its alrightI went as far as I could, I tried to findanew faceThere isn't one of these lines that I would eraseI livedamillion miles of memories on that roadWith every step I take I know that I'm not aloneYou take the home from the boy, but not the boy from his homeThese are my streets, the only life I've ever known,who says you can't go home[Chorus]I been there, done thatand I ain't looking thatIt's beenalong long roadFeels like I never left, that's how the story goesIt doesn't matter where you are, it doesn't matter where you goIf it'samillion miles aways or justamile up the roadTake it in, take it with you when you go,who says you can't go home[Chorus]It's alright, it's alright, it's alright, it's alright, its alrightWho says you can't go home [x2]
GTC ကျောင်းနားက ထမင်းနဲ့ဟင်း ပုံပွဲလေး စားချင်လို့ ပါ
GTC ကျောင်းနားက ထမင်းနဲ့ဟင်း ပုံပွဲလေး စားချင်လို့ ပါ...အသား နှစ်မျိုး အရွက် နှစ်မျိုး နော်... ပြီးရင် သရီးကာလာ သွားသောက်မယ်...ဘော်ဘော်တွေနဲ့ တော်ကီပစ်မယ်...ဒါပဲ....မိန်းဘက်ဆိုင်ကယ် နဲ့ ပတ်မယ်...ညကျရင် 32လမ်း ကျောင်းရှေ့က ဖက်ထုပ်ကြော် စားမယ် ရေနွေးကြမ်းနဲ့...ဘာဂျာ , ၀က်သိုး ဒိုးမယ်ဟေ့... လမ်း ၉၀ ဘဏ်ရှေ့က ထမင်းကြော် ကြက်ဥ နဲ့...
Steve Jobs Commencement Speech 2005- "Sometimes Life will hit you withabrick, don't lose faith."- "Follow your heart and what you truly want to become, everything else is secondary."
ကျွန်တော် အခု စာအုပ်တစ်အုပ်ဖတ်နေပါတယ်... ကျွန်တော့ရဲ့ professional နဲ့ တိုက်ရိုက်ကြီးတော့ မပက်သက်ပါဘူး...အဖေက မြန်မာကနေ ဒီစာအုပ်လေးကို ကျွန်တော့အတွက် ပို့ပေးတော့...အဖေက အလကားတော့ ပို့ပေးတာမဟုတ်ဘူး..အကြောင်းရှိလို့ပဲ နေမှာဆိုပြီး ကျွန်တော်ဖတ်ဖြစ်သွားတယ်...တချို့သော အကြောင်းအရာတော်တော်များကို ကျွန်တော်နားမလည်ပါ...သို့ပေမဲ့ ကျွန်တော် ရသလောက် ဗဟုသုတများကိုတော့ မှတ်သားပါသည်...အဲဒီစာအုပ်ထဲမှ အကြောင်းအရာ တချို့အား ပြန်လည်ကူးယူရေးသားကာ ဖော်ပြလိုက်ပါတယ်....ဒေါက်တာနေဇင်လတ် ရေးသားသော စိန်ခေါ်မှုများနှင့် မဟာဗျူဟာစီမံခန့်ခွဲမှု စာအုပ်ပါ...အားလုံးမှာ ထိုက်သင့်တဲ့ပညာ (knowledge) ဆိုတာ ရှိကြပါတယ်...ကိုယ်က boss ဖြစ်လို့ အထက်စီး အမြဲယူလို့ မရပါ...ပညာရဲ့ အဓိပ္ပာယ် ကိုက (Knowledge = Education + Experience) ဖြစ်လို့ပါ..ကိုယ်တိုင်အပါအ၀င် ကုမ္ပဏီကလူတွေ ဘယ်လိုပညာရှိနေကြတယ်ဆိုတာ လေ့လာဖို့ကောင်းပါတယ်...Static Knowledge ဆိုတာ ရပ်တန့်သွားတဲ့ သဘောရှိပါတယ်...Static Knowledge >>> Learned, and applyထိုက်သင့်တဲ့ အရွယ်အထိ ထိုက်သင့်တာတွေကို လေ့လာသင်ယူခဲ့ပြီး လုပ်ငန်းခွင်မှာ အသုံးချတယ်...အသုံးချမှု လုံလောက်ပြီဆိုတဲ့ people group member အသိနဲ့ ထပ်ပြီး လေ့လာမှု မလုပ်ကြသူတွေပါ... ဥပမာ (Finance နဲ့ Account) မှာ အတွေ့ရများပါတယ်...Progressive Knowledge ဆိုတာကတော့ အမြဲတမ်း လုပ်ရင်း ၊ လေ့လာနေကြသူများ ဖြစ်ပါတယ်... ဘ၀လဲ တဆင့်ပြီးတဆင့် တိုးတက်သွားလေ့ရှိကြပါတယ်...Progressive Knowledge >>> Learned >>> Applied >>> Learned Moreလေ့လာပြီး လက်တွေ့မှာ အသုံးချတယ် ၊ ထပ်လေ့လာတယ် ၊ ပြန်အသုံးချတယ် ၊ ရပ်တန့်မနေဘဲ အလုပ်လုပ်နိုင် သရွေ့ လေ့လာနေသူများ ဖြစ်ကြပါတယ်... CEO တွေ၊ မဟာဗျူဟာသမားတွေ လုပ်ရမယ့် အလုပ်ဖြစ်ပါတယ်...အခြေခံက လူတွေရဲ့ Personality ဆိုတဲ့ ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး ဖြစ်ပါတယ်...Personality ဆိုတာကို ' The sum total of ways in which an individual reacts and interacts with others ' လို့အဓိပ္ပာယ် ဖွင့်ထားပါတယ်... တစ်ဦးချင်းသော်လည်းကောင်း ၊ အများနှင့်သော်လည်းကောင်း အပြန်အလှန်သဘော ဆောင်ရွက်လုပ်ကိုင်နိုင်မှု ဖြစ်ပါတယ်...ကောက်နှုတ်ချက်Knowledge ကို ဟိုးအရင်က Education တစ်ခုတည်းကိုသာ ဆိုလိုသည်ဟု ထင်ခဲ့သည်...ပြန်စဉ်းစားကြည့်တော့မှ Knowledge = Education + Experience ဆိုတာပါလားဆိုတာ သိလိုက်ရသည်..ပိုပြီး ပြည့်စုံသွားသည်... Static Knowledge နှင့် Progressive Knowledge အကြောင်းကို သေသေချာချာ သိလိုက်ရသည်... Progressive Knowledge သည် အလွန်အရေးကြီးကြောင်း...Because of Competition is now Global ဖြစ်နေပြီဟု ဆရာ နေဇင်လတ်ဧ။် ပညာခေတ်နှင့် မြင့်မားစံနှုန်း စာအုပ်တွင် ဖတ်ခဲ့ရသည်...Personality ဆိုသော အကြောင်းအရာသည်လည်း မှတ်သားဖို့ကောင်းသည်....
သူငယ်ချင်းက လူတစ်မျိုးဆိုတဲ့ article လေးတစ်ခုကို email ကနေ ပို့ပေးတော့ ဖတ်ကြည့်ရာကနေ သဘောကျလို့ ထပ်ကူးရေးပြီး တင်လိုက်ပါတယ်...အဲဒီထဲမှာတော့ မိဘ, ဆရာ , မောင်နှမ, ချစ်သူ, သူငယ်ချင်း စသည်တွေကို ဖွင့်ဆိုရေးပြထားပါတယ်... အဲဒီထဲမှာမှ ကိုယ့်ကိုကိုယ် ဆိုတဲ့ စာပိုဒ်လေးကို အကြိုက်ဆုံးဖြစ်တာကြောင့်....လောကကြီးတွင်လူတစ်မျိုးရှိသည်.....မိဘ၏ဆိုဆုံးမမူနှင့် နွေးထွေးသော မေတ္တာအောက်တွင် ကြီးပြင်းလာခဲ့သည်။ ဆရာများ၏သွန်သင်ဆုံးမမှု အောက်တွင် အမှားအမှန်ကို ခွဲခြားတတ်လာခဲ့သည်။ မောင်နှမများ၏ချစ်ခင်မှုအောက်တွင် စည်းလုံးခြင်းတွေ ရယူတတ်လာခဲ့သည်။ ချစ်သူ၏ ကြင်နာယုယမှု အောက်တွင်အချစ်စစ်ကို ရှာဖွေတတ်လာခဲ့ပြီး သူငယ်ချင်းများ၏ ကူညီမူအောက်တွင် ဘ၀၏ တက်လမ်းကိုရွေးချယ်တတ်လာခဲ့သည်။ ထိုသူများသည် ကိုယ့်ဘ၀ထဲသို့ ဧည့်သည်တယောက်လို ၀င်လာကြသည်။အချိန်တန်လျှင် ထွက်သွားကြသည်။ သူတို့သည် ဘ၀ကို အသိဥာဏ်နှင့် ဗဟုသုတ တိုးပွားအောင်ကူညီပေးကြသည်။ ဘ၀ကို ပျော်ရွှင်မူများဖြင့် စိုပြည်စေခဲ့သည်။ ထိုသူများကို ကျေးဇူးတင်ကြောင်းလှိုက်လှိုက်လှဲလှဲပြောဖို့ တစ်ခါတစ်ရံတွင် မေ့နေတတ်သည်။ ထိုလူမျိုးမှာ ကိုယ့်ကိုယ်တိုင်ပင်ဖြစ်ပါသည်။ကျေးဇူးတင်ပါသည် ခင်ဗျာ...
I will not say I failed 1000 times, I will say that I discovered there are 1000 ways that can cause failure.Thomas EdisonEveryone thinks of changing the world, but no one thinks of changing himself.Leo TolstoyInaday when you don't come across any problems - you can be sure that you are travelling inawrong path.Swami Vivekanandaကြိုက်နှစ်သက်လို့ Copy and Paste မလုပ်ဘဲ သေချာလေးရိုက်ပြီးမှ တင်လိုက်ပါတယ်...ကျွန်တော်လည်း မှတ်မိသွားတာပေါ့..ဒီ Great Words တွေကို email ကနေ ပို့ပေးတဲ့ သူငယ်ချင်းကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...နေ့စဉ်နဲ့အမျှ အဆင်မပြေမှုတွေ ကြုံတွေ့နေရသော်လည်းပဲ အဲဒီအဆင်မပြေမှုများကို ကြိုးစားဖြေရှင်းနိုင်ရန် အလို့ငှာ ဒီ Great Words လေးတွေသည် ကျွန်တော့ကို အားဆေးတခွက် ဖြစ်စေပါသည်...ကျေးဇူးတင်ပါသည် ခင်ဗျာ...
နာမ်ပုဒ် - ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်မဲကြိယာပုဒ် - ဆန့်ကျင်ကန့်ကွက်သည်black ball–verb (used with object) 1.to vote against (a candidate, applicant, etc.). 2.to exclude socially; ostracize: The whole town blackballed them. 3.to reject (a candidate) by placingablackball in the ballot box. –noun 4.a negative vote, esp. in deciding on an applicant or candidate. 5.a black ball placed inaballot box signifyinganegative vote.
ဒီ Tutorial လေးက Distance Vector နဲ့ Link State Routing လေးကို ရှင်းပြထားတာ တော်တော်လေး ကောင်းပါတယ်... မှတ်မိအောင်ကို ရှင်းပြထားတာပါ...Read Here
ကျွန်တော် ကွန်ပျူတာကို စတင်လေ့လာတာ ၁၀တန်းပြီးခါစ ဆိုပါစို့... State ကျောင်းသားဘ၀တုန်းက ဟိုနှိပ်ဒီနှိပ်က ထားပါတော့...၁၆ နှစ်အရွယ်...၁၇ လောက်ပေါ့...ခုဆို ၂၃ နှစ်ပြည့်ခါစ...၆ နှစ် နဲ့ ၇ နှစ် သက်တမ်းရှိခဲ့ပြီပေါ့...ခု ဘယ်နေရာကို ရောက်နေပြီလဲ ဆိုတာကို ပြန်လည်စဉ်းစားကြည့်တယ်...ခုမှ ကိုယ်သွားချင်တဲ့ လမ်းကြောင်းလေးကို မြင်နေရပြီ ဆိုပါတော့...ကွန်ပျူတာကို စတင်လေ့လာချိန်ကတော့ ဘာတွေမှန်းကိုမသိရှုပ်ရှက်ခက်နေတဲ့ သင်တန်းတွေ..စာမေးပွဲတွေ..ကို စုံလို့...လေ့လာရင်း လေ့လာရင်း လမ်းပျောက်တာလဲ ခဏခဏပါပဲ...ဒါတောင် ဒီ ကွန်ပျူတာနယ်ပယ်တခုထဲမှာပဲနော်..တခြား Management, Business, Accounting တို့ထဲကို စိတ်မ၀င်စားမိလို့...ကျွန်တော် ခုရောက်နေတဲ့ နေရာကို ရောက်ဖို့အတွက် လမ်းကြောင်းကိုသာ သိခဲ့မယ်ဆိုရင် ၂ နှစ် ၃ နှစ်လောက်ပဲ ကြာလိမ့်မယ်လို့ ခံစားရတယ်...ဒီတော့ ကျန်တဲ့ ၄ နှစ်လောက်က အချိန်ဖြုန်းတာများလား...အဲဒီလို စဉ်းစားမိတိုင်း ကိုယ့်ကိုကိုယ် သိပ်ဘ၀င်မကျဘူး...ဒီထက်ပြောရင် သိပ်မကျေနပ်ဘူးပေါ့...ပြန်စဉ်းစားကြည့်ပြန်တော့လည်း အဲဒီ လေးနှစ်အတွင်း ကျွန်တော် အချိန်မဖြုန်းပါဘူး...လေ့လာဆည်းပူးနေတာပါပဲ...ကွန်ပျူတာနယ်ပယ်ထဲမှာပဲ လမ်းများနေတယ်လို့ပဲ ပြောရမှာပဲ...လမ်းများလို့ ဖမ်းစားခံလိုက်ရတဲ့ ကျွန်တော့အချိန်တွေအတွက်တော့ နှမြောမိတာပေါ့...ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် အချိန်မဖြုန်းဘဲ တခုခုကိုတော့ လေ့လာနေတယ်...ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော်လေ့လာခဲ့တာတွေဟာ ခုကျွန်တော်အသုံးချနေတာတွေနဲ့ သိပ်မဆိုင်သလိုပဲ...၉၀ရာခိုင်နှုန်းလောက်မဆိုင်ဘူး...ဒီတော့ ကျွန်တော်စဉ်းစားမိတာက..ကျွန်တော်ခု အသုံးချနေတာတွေကို ကျွန်တော်လေ့လာနေတာ ၂ နှစ် ၃ နှစ် အချိန်ပေးခဲ့ရတယ်...နောက် ကျွန်တော် ထပ်သွားမယ့် နေရာတစ်ခုကိုရောက်ဖို့ ကျွန်တော် ဘယ်လောက်အချိန်ပေးရမလဲ...၃ နှစ်ဆို ၃ နှစ်ပဲ ပေးချင်တယ်..၆ နှစ်လောက်ပေးပြီးတော့မှ အော် ဒါကို ငါလုပ်ရင် ၃ နှစ်လောက်နဲ့ ရနိုင်ပါလားလို့ ပြန်ပြီး ကြေကွဲမနေချင်တော့ဘူး....အရေးကြီးတာက ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတဲ့ လမ်းကြောင်း...အဲဒါသိရင် ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ် သွားမယ်ဆိုတဲ့ ဆုံးဖြတ်ချက်...အဲဒါတွေ ကျွန်တော်လိုနေပြီ...ကျွန်တော်ခုနေရာကိုရောက်ဖို့ အဲဒါတွေ ရှိခဲ့ပါတယ်...ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် ဘာလို့ ၃ နှစ် ပေးရမဲ့ အချိန်ကို ၇ နှစ်ပေးခဲ့ရလဲ...ကျွန်တော့ Planning က သေချာသလိုလိုနဲ့ မသေချာခဲ့လို့ပဲလို့ ခံစားရတယ်...အဲဒီလို ဖြစ်ခဲ့တာဟာလည်း ကျွန်တော့၇ဲ့ ညံ့ဖျင်းမှုတွေလည်းပါမယ်...အခြေအနေတွေ အချိန်အခါတွေ အကြောင်းအများကြီးပေါ့...ထားပါတော့လေ...ခု ကျွန်တော် နောက်ထပ်ဆက်လျှောက်မယ်...အဲဒီအခါ ကျရင်တော့ ပေးရမဲ့ အချိန်ထက် ၁ နှစ်လောက် ပိုပေးရတာလောက်ကိုပဲ ဖြစ်သင့်တယ်လို့ ယူဆမိတယ်...ကဲရေးနေရင်းနဲ့ အလုပ်ကပေါ်လာပြီ...အလုပ်လုပ်လိုက်ဦးမယ်..
သတိထားမိသည်က ကျွန်တော့် အင်္ဂလိပ်စာ အရင်ကထက် ပိုဆိုးသွားခြင်းဖြစ်သည်...သေချာစဉ်းစားကြည့်သေးသည်...ဟုတ်ပါသည်...အင်္ဂလိပ်စာ ကို ပြန်လည် လေ့လာမည်...တချို့ အသုံးအနှုန်းများဆိုလျှင် သိသလိုလို မသိသလိုလို ( အရင်က သေချာသိသည် )...ဒါပေမဲ့လည်း ရောကြိတ်ဖောနှိပ်လိုက်သည်...တဖက်ကလည်း ကိုယ်ဘာပြောချင်လည်း နားလည်သည် ဆိုတော့ကာ အေးဆေး...ဒီလိုလုပ်နေလို့ မဖြစ်...Level up မဖြစ်ရင်နေ Level ကျ မသွားဖို့ရာ အရေးကြီးသည်...ခု Level တွေ ကျနေသည်...ဟိုအရင်နှင့် ခု ဘာကွာနေသနည်း...ကိုယ့်ကိုကိုယ်စဉ်းစားကြည့်သည်...ပြေးခဲ့လို့ မောပြီး နားနေသည်လား... အနားလွန်ပြီး ပျင်းနေသည်လား...၀န်ခံရလျှင် ပျင်းနေသည်... အဲဒါမကောင်းမှန်းသိသည်...
One Day at Cisco
ခု တလော အလုပ်ကလည်း တအားကို များတော့...ဘာလုပ်ချင်တယ်ဆိုတာကို မစဉ်းစားဖြစ်ဘူး...လူက အလုပ်ကို နိုင်နေတဲ့ အချိန်ဆိုရင် ကိုယ်ဖြစ်ချင်တာလေးကို စိတ်ကူးယဉ်ပြီး လုပ်နေရတာ တော်တော်စိတ်ချမ်းသာတယ်...အလုပ်က လူကို နိုင်တဲ့ အခါတော့ အလုပ်ပြီးပေမဲ့ ကိုယ့်စိတ်ထဲမှာ နောင်ဖြစ်ချင်တာလေးတွေက ဘာတွေဆိုတာကို စဉ်းစားဖို့ အချိန်မရတော့....ခု စဉ်းစားမိတယ်... နောက် အမြဲအဲလိုတွေ အလုပ် က လူကိုနိုင်နေရင် ဘယ်လိုလုပ်ရပါ့....ခု လမ်းပျောက်နေသလို ခံစားမိတယ်...ငါ ဘာလုပ်ရမလဲ...ငါ ဘာဖြစ်ချင်လဲ... သိတယ်ထားဦး..ဘယ်ကစလုပ်ရမလဲ...ဒီလိုလေးပဲ သွားနေလို့လဲ မဖြစ်ဘူးဆိုလားဆိုတော့လည်း ဖြစ်တာပဲ...အဆင်ပြေနေတာပဲ...ဒါပေမဲ့ အဲလိုမဖြစ်ချင်ဘူး...ဒီတော့ လမ်းပျောက်နေပြီလို့ ခံစားရတယ်...ငါ လမ်းပျောက်နေပြီလား...
ကျွန်တော် နှစ်သက်သော အဆိုတော် စိုင်းထီးဆိုင် ကွယ်လွန်ခြင်း အတွက် အလွန်ဝမ်းနည်းမိပါတယ်...ကျွန်တော်ဟာ စိုင်းထီးဆိုင် နဲ့ ခင်မောင်တိုး သီချင်းများကို အလွန်ကြိုက်နှစ်သက်သူ တစ်ယောက်ဖြစ်ပါတယ်...Best Regards,Sai Linn Thu
X P S M1330
ဆွဲလိုက်ပြီ သဘောကျလို့...Processor : Intel(R) Core(TM)2 Duo CPU T5550 @ 1.83GHz (2CPUs), ~1.8GHzMemory :4GBHDD : 160 GB အလုပ်ဖြစ်သွားပြီ...လုပ်ချင်တာလေးလုပ်လို့ အဆင်ပြေသွားပြီ...သိုင်းကျူး တီတီအန်အိုင်...
A man came home from work late, tired and irritated, to find his 5-year old son waiting for him at the door."Daddy, may I ask youaquestion?""Yeah sure, what it is?" replied the man."Daddy, how much do you make an hour?" "That's none of your business. Why do you ask suchathing?" the man said angrily."I just want to know. Please tell me, how much do you make an hour?" pleaded the little boy. "If you must know, I make $20 an hour.""Oh," the little boy replied, with his head down. Looking up, he said, "Daddy, may I please borrow $10?"The father was furious, "If the only reason you asked that is so you can borrow some money to buyasilly toy or some other nonsense, then you march yourself straight to your room and go to bed. Think about why you are being so selfish.I work hard everyday for such this childish behavior."The little boy quietly went to his room and shut the door.The man sat down and started to get even angrier about the little boy's questions.How dare he ask such questions only to get some money?After about an hour or so, the man had calmed down, and started to think:Maybe there was something he really needed to buy with that $10 and he really didn't ask for money very often. The man went to the door of the little boy's room and opened the door. "Are you asleep, son?" He asked."No daddy, I'm awake," replied the boy."I've been thinking, maybe I was too hard on you earlier," said the man,"It's beenalong day and I took out my aggravation on you. Here's the $10 you asked for."The little boy sat straight up, smiling."Oh, thank you daddy!" He yelled.Then, reaching under his pillow he pulled out some crumpled up bills.The man, seeing that the boy already had money, started to get angry again. The little boy slowly counted out his money, then looked up at his father. "Why do you want more money if you already have some?" the father grumbled."Because I didn't have enough, but now I do," the little boy replied."Daddy, I have $20 now.Can I buy an hour of your time? Please come home early tomorrow.I would like to have dinner with you". Share this story with someone you like..But even better, share $20 worth of time with someone you love. It's justashort reminder to all of you working so hard in life.We should not let time slip through our fingers without having spent sometime with those who really matter to us, those close to our hearts. If we die tomorrow, the company that we are working for could easily replace us inamatter of days. But the family & friends we left behind will feel the loss for the rest of their lives. And come to think of it,we pour ourselves more into work than to our family an unwise investment indeed.
Singapore မှာ အလုပ်လုပ်မယ်
ကောင်းတယ် ဗဟုသုတရတယ် သဘောကျတယ်ဒီမှာဖတ်ဗျာ
နိုင်ငံတကာမှ မြန်မာကျောင်းသားများနှင့် အင်တာဗျူး (အပိုင်း ၅ )
I'm in Singapore for one year!
Dear All,5 Jan 2007 -5Jan 2008Thanks you very much indeed to all for helping me to survive in Singapore.Best Regards,Sai Linn Thu Remarks :Maybe surrounded by,A million people I,Still feel all alone,I just want to go home.But.................................
Cisco က Indian Engineering Students တွေကို CCIE-Le...
GTC ကျောင်းနားက ထမင်းနဲ့ဟင်း ပုံပွဲလေး စားချင်လို့...
နိုင်ငံတကာမှ မြန်မာကျောင်းသားများနှင့် အင်တာဗျူး (...